notification+kjdmuwwv7-pd@facebookmail.comRe: [ကိုရီးယား , စင်ကာပူ မှ တင်ပို့ ၍ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် လက်လီလက်ကား အိမ်အရောက်] Men Shoe ဒီဇိုင်းလ...2015-05-16 06:12:38
To: စင်ကာပူ မှ တင်ပို့ ၍ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် လက်လီလက်ကား အိမ်အရောက်From: notification+kjdmuwwv7-pd@facebookmail.comSubject: Re: [ကိုရီးယား , စင်ကာပူ မှ တင်ပို့ ၍ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် လက်လီလက်ကား အိမ်အရောက်] Men Shoe ဒီဇိုင်းလ...Received: 2015-05-16 06:12:38
Yelin Oo commented on Shwe Pa War's photo in ကိုရီးယား , စင်ကာပူ မှ တင်ပို့ ၍ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် လက်လီလက်ကား အိမ်အရောက်.Yelin Oo 11:42am May 16 ဒီပုံစံမျိုးမိန်းကလေးစီးဒေါက်အထူရှိလားComment HistoryShwe Pa War9:16pm May 9Hi ko aung myin aung! ၃၉၂၀၀ကျပ် အိမ်အရောက်ဈေးပါAung Myin Aung8:48pm May 9How much?Original PostShwe Pa War8:35pm May 9Men Shoe ဒီဇိုင်းလှလှ လိုချင်တာများမှာကြပါ Promotion ၃၉၂၀၀ကျပ် Colour and size ပြော၍မှာနိုင်ပါသည် Viber msg to +6591897772 . New arrival update ပစ္စည်း များ အား https://www.facebook.com/groups/709768119067626/ တွင်လွယ်ကူစွာရှာဖွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်View Post on Facebook · Edit Email Settings · Reply to this email to addacomment.
Re: [ကိုရီးယား , စင်ကာပူ မှ တင်ပို့ ၍ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် လက်လီလက်ကား အိမ်အရောက်] Men Shoe ဒီဇိုင်းလ... - Message deleted